Avy amin’ny fandaharan’asa « American Film showcase ». Mandalo eto amintsika ary handray anjara amin’ireo hetsika ho an’ny horonantsary fohy ‘RFC) ireo mpanatontosa horontsary amerikana roa ahitana an’ i Amy Scott sy Marc Levin. Fivahinianana …Tohiny
Vakoka iray ao amin’ ny tanànan’i Mahajanga ny « Baobab Tree Hotel and Spa » izay tosika iray mampandeha ny lafin’ny fizahantany, saingy noho ny zava-nisy dia niato nandritra ny taona telo ity reharehan’ny faritra …Tohiny
Fanadinam-panjakana CEPE : 31 370 no isan’ny mpiadina an-drenivohitra
Tapitra ny 15 martsa lasa teo ny fara-fisoratana anarana amin’ny fanadinam-panjakana CEPE. Ho an’ny eto an-drenivohitra manokana, dia nahatratra 31 370 ireo mpiadina voasoratra anarana eo anivon’ny fari-piadidiam-pampianarana na Cisco Antananarivo renivohitra, izay nitombo raha …Tohiny
Depiote Mapar : Nanakorontana tao Toamasina
Mazava izao fa ny hikorontanan’ny firenena mihitsy no tanjon’ny Mapar raha tarafina tamin’ny zava-niseho tany Toamasina ny sabotsy teo. Efa nahafantatra fa tsy nahazo alalana tany amin’ny tompon’andraiki-panjakana mantsy ireto solombavambahoaka ireto nefa dia nanao …Tohiny